Bilaogy Ampiasàna Lahatsary & Kambodza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jolay 2017 7:08 GMT
Eath Chhnon (fantatra ihany koa amin'ny hoe “Village Girl“) dia Kambodziana “mpanao bilaogy mampiasa lahatsary ” na vlogger. Lehibe tany amin'ny tanàna kely iray ao Kambodza any akaikin'i Angkor Wat, iray amin'ireo rakitra sarobidy ara-kolontsaina ho an'ny firenena. Tamin'ny 2003, teo amin'ny faha-20 taonany, nandeha nankany New York izy. Ataon'i Eath anaty bilaogy mampiasa lahatsary ny tantaran'ny fiainany.
Fony aho nipetraka tany Kambodza dia tsy mbola nikitika velively na nahita ny atao hoe solosaina – tanàna kely iray no nonenan'ny fianakaviako –tantsaha ry zareo ary tsy manana herinaratra. Rehefa tonga tany Etazonia aho, nianatra samirery ny fomba fampiasàna solosaina. Nanam-bintana aho nifanena tamin'i Ryanne Hodson izay nampiseho tamiko ny fomba fanaovana azy. Nandany andro iray manontolo teo aho tamin'izany. Manana ny torolàlany ao anaty aterneto i Ryanne, ka dia afaka mianatra mora toy izay nataoko ny olona tsirairay.
Heveriko fa ireo Kambodziana, na ao an-toerana izy na any amin'ny toerana hafa eto amin'izao tontolo izao, dia tokony haneho ny heviny – ary mitantara amin'izao tontolo izao momba izay heviny rehetra, ny kolontsainy, ny zavatra niainany. Tsy betsaka ny Kambodziana manao bilaogy mampiasa lahatsary ary misy antony tsara mihitsy izany (ny fitaovana, ny tsy fahampian'ny fahafahana miditra aterineto, ny sakana apetraky ny teny, ny fahaizamanao, sns…) Izany eo ihany, fa tiako ny handrisika ireo Kambodziana hanao bilaogy ampiasàna lahatsary. Izay no antony nanombohako listserv iray ho fanampiana ireo olona ao Kambodza hianatra ny fomba fanaovana azy io.